Chike Nwasike - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
CEO, Pres.  Ụlọ ọrụ Novantus Corp.
Aha ụlọ ọrụ: Novantus Corp.
Weebụsaịtị ụlọ ọrụ: www.novantus.com
Adreesị ụlọ ọrụ: Trillium Towers Ctr.
6320 Canoga Ave., Woodland Hills, CA,
Profaịlụ Chike Nwasike:
Chike Nwasike Biography :
Mazị Nwasike bụ onye isi ụlọ ọrụ, onye isi teknụzụ na onye isi oche nke ụlọ ọrụ kemgbe mmalite ya.  Mazị Nwasike bụ onye gụsịrị akwụkwọ na injinia na UCLA.  E were ya na mbụ dị ka onye injinia na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ Mobil Oil wee nọrọ afọ 20 sochirinụ na mmepe nke sistemu ngwanrọ nnukwu ụlọ ọrụ dị mgbagwoju anya.  Mazị Nwasike tọrọ ntọala ụlọ ọrụ mbụ ya n'afọ 1985 bụ ọkachamara n'ihe gbasara usoro ụlọ akụ.  O kere usoro Proview, nke e nyere ikike na nnukwu ego na ụlọ akụ mpaghara ma soro na ihe karịrị 17 isi ụlọ akụ mergers na consolidations ebe o kere software maka ụlọ akụ ntughari, Integrated ahịa ozi na profitability analysis.  Dịka onye ndụmọdụ IBM na Mexico City, o mepụtara usoro sọftụwia dabere na asụsụ maka njirimara ndị ahịa.  Ụlọ ọrụ ya gara n'ihu ịjụ maka Microsoft wee mepụta usoro nlekọta ọrụ ndị ahịa na mba maka Disney Interactive.
Ụfọdụ n'ime ndị ahịa Mr. Nwasike gara aga gụnyere ụlọ ọrụ dịka IBM, Comerica, US Bancorp, Wells Fargo Bank, Bank of America, Washington Mutual, Glendale Federal, First Bank of Chicago, Multibanco Comermex--Mexico, Union Bank, Harris Bank
Mazị Nwasike bụkwa onye mbipụta wee hibe ma jikwaa ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ netwọkụ dị n'ụsọ osimiri. Mazị Nwasike bụ onye nlekọta nke Hillsyke Foundation, otu na-akwado ndị inyom di ha nwụrụ na ụmụ mgbei Africa. Ọ bụ onye isi teknụzụ nke ụlọ ọrụ azụmaahịa mba ụwa na onye ndụmọdụ ọtụtụ gọọmentị na obodo na eGovernment na akpaaka ọrụ. Mazị Nwasike jere ozi dị ka Adjunct Professor of Electronic Commerce na La Sierra University School of Business and Management. Chike hibere Novantus n'afọ 1999 site n'ebumnuche pụrụiche nke imepụta ụzọ ọhụrụ na nke ọhụrụ nke ịzụlite na itinye usoro sọftụwia dị mgbagwoju anya na ọnụ ala yana obere ihe egwu nye ndị ahịa. O duru Novantus gaa na ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ nke nwere ọnụnọ ugbu a na kọntinent 3 na ebe ndị ahịa na-agbasa ngwa ngwa.
Ewepụtara na https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Chike_Nwasike&oldid=71962
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 30 Ọnwa iri na abụọ 2021, mgbe 21:03